पर्समा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी पांच चिज, तपाइ कंगाल बन्नुहुन्छ !! - E ALL NEPAL
पर्समा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी पांच चिज, तपाइ कंगाल बन्नुहुन्छ !!
काठमाडौँ । तपाइको गोजीमा सधै पर्स हुन सक्छ अनि तपाई आफ्नो पर्ससधै पैसा ले भरिइ रहोस भन्ने चाहना राख्नु भएको हुन सक्छ । तर तपाईंको पर्समा पैसा खाली नहोस भन्न चाहानु हुन्छ, भने तपाईले पर्ससँग सम्बन्धित केहि चीजहरूको ख्याल राख्नुपर्छ। ज्योतिस शास्त्रमा बताइएको छ कि पर्समा मा पोइसा तब कैले खाली हुदैन जब तपाई प्रति लक्ष्मी देवीको कृपा रहने छ। यसैले पर्स बोक्नु हुन्छा भने यी पांच कुरहौमा ध्यान राख्नुहोस
सब भन्दा पहिलो मुख्न्य कुरा त यो हो कि तपाई को पर्स फाटेको हुनु हुदैन। फाटेको पर्से आर्थिक नोक्सान गराउने माध्यम मानिन्छ। यसकारण पर्स फाट्यो भने तेस्लाई तुरन्त बदल्नु पर्छ। पर्से को सम्बन्ध धनसँग हुन्छ न कि कागजात संग । यसैले आफ्नो पर्समा धन राख्नुस कागजात हैन। धेरै जसो मान्छेहरु पुरानो रसिद, बिल आदि पनि राख्ने गर्दछन यसले गर्दा पर्सा मा पैसा कम टिक्छ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पुरानो कागजात मा राहु को प्रभाव हुन्छा यसैले यस्ता चिज पर्समा जम्मा गरेर न राख्नुहोस। खानेकुरा हरु जस्तै चकलेट टफी पान मसला आफ्नो पर्स मा न राख्नुहोस। पर्से मा दाबी क्याप्सुल तेब्लेट राख्नु पनि धन को लै असुभ मनिन्छ। वास्तु विज्ञान क अनुसार यस्ता चिजले नकारात्मक उर्जा बडाउने काम गर्छ। पर्समा फलामका बस्तु जस्तै चक्कु ब्लेड आदि नराख्नु होस् जोतिस शास्त्रका अनुसार तामा चाँदीका चिज पर्समा राख्न लाभप्रद मानिन्छ ।
नेपाल नया युगमा प्रवेश गरेसँगै दुबइबाट १ हजार नेपाली फर्काइए
सावधान ! मृत्युको कारण बन्दै मस्तिष्कघात, कसरी बच्ने ? पुरा पढ्नुहोस अनि शेयर गर्नुहोस